Tababarka Dhibaataynta Shirkadda Shirkadda - Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Tababarka Dhibaataynta Shirkadda Shirkadda
"Hoggaamiyeyaasha ganacsiga waa in ay caddeeyaan in ay tallaabo ka qaadayaan joojinta kadeedka galmada" ayaa ku dhawaaqay Guddiga Xuquuqda Aadanaha iyo Xuquuqda Aadanaha.
... in si joogto ah u daawashada filimada internetka si aad ah loola xiriiriyo habdhaqanka galmada iyo habdhaqanka xun? Toban boqolkiiba raga waaweyn ee UK ayaa qiray in ay isticmaalaan ficil-galinta internet-ka ee adag ee shaqada. Si ka duwan sida khamriga ama khalkhalka daroogada, dabeecadaha galmada ee adagi way adag tahay in la ogaado, laakiin saameynteeda ma aha mid waxyeello gaarta. Ragga dhalinyarada ah ayaa si gaar ah ugu nugul isticmaalka qasabka ah, iyo, sii kordhaya, haweenka da'da yar.
Bishii Disembar 2017, Guddiga Xuquuqda Aadanaha iyo Guddiga Xuquuqda Aadanaha (EHRC) ayaa u qoray Guddoomiyeyaasha FTSE 100 iyo shirkado kale oo waaweyn oo sheegaya in ay qaadi doonto ficil sharci ah iyada oo ay jirto caddayn muujinaysa fashil la'aanta nidaamka looga hortagayo, ama la tacaala, dhibaataynta galmada *. Tani waxay ku dhacday jawaabta Hollywoodka iyo Westminster fadeexado jinsi, iyo ololaha #MeToo. Waxay ka codsatay inay bixiyaan caddeyn ah:
Maxaa ilaalin ah oo ay haystaan ​​si looga hortago dhibaateyn galmo
talaabooyinka ay qaadeen si loo hubiyo in dhammaan shaqaalaha ay awoodaan inay soo sheegaan dhacdooyinka khashkhashaadda iyaga oo aan ka cabsanayn ciqaab
sida ay u qorsheynayaan inay ka hortagaan dhibaataynta mustaqbalka
U waca talaabo
Urur kasta wuxuu u nugul yahay halista dhibaatooyinka galmada. Noo ogolow inaan kaa caawinno inaad si wax ku ool ah wax uga qabato adoo samaynaya hab hawleedka oo dhan si loo yareeyo khatartaas. Waxaan adeegsanaa adeegyo si aan u ilaalino muuqaalka dadweynaha ee shirkaddaada iyo xoogaga shaqaale ee aagga dhaqanka galmada.
Adeegyada waxaa ku jira
Tababar maalinle ah oo loogu talagalay caafimaadka shaqada iyo Xirfadlaha HR ee saameynta sawir-gacmeedka internetka ee caafimaadka maskaxda iyo caafimaadka jirka. Waxaa la aqoonsan yahay Kuliyada Boqortooyada ee GP-yada.
Kooras nus maalin ah oo loogu talagalay xirfadleyaasha HR ee saameynta sawir-gacmeedka internetka ee ku saabsan caafimaadka maskaxda iyo jirka, dhibaataynta galmada, masuuliyada dambi iyo burburka qaddarinta. Ka-qaybgalayaashu waxay baran doonaan daraasad xaaladeed iyo cilmi-baaris ku saabsan waxa tababarka loo sameyn karo si ay uga qaybqaataan mas'uuliyadda sharciga ee shirkadda si looga hortago dhibaataynta galmada mustaqbalka
Tababarayaasha 30-40 ee ku saabsan saameynta sawir-gacmeedka internetka ee caafimaadka, dabeecadda goobta shaqada, masuuliyad dambi shakhsi ahaaneed iyo sida loo dhisayo adkeysi ahaan sidii tallaabo ka hortag ah oo looga hortagi lahaa dhibaatooyinka galmada
Munaasabadda saacadda ah ee 1 illaa heer kasta oo kooxeed oo sharraxaya saameynta lidka-ficilka internetka ee caafimaadka, dabeecadda goobta shaqada, masuuliyada ciqaabta shakhsi ahaaneed iyo sida loo dhiso adkeysi ahaan sidii tallaabo looga hortagayo.
Abaalmarinta Reward - Jacaylka, Galmada iyo Internetka, waa hay'ad samafal oo caalami ah oo bixisa wada sheekeysiyo iyo tababaro ku saabsan saameynta sawir-gacmeedka internetka ee caafimaadka, dareenka, xiriirka iyo dambiga. Waxaan ansixineynaa Kuliyada Boqortooyada ee Dhaqaatiirta Guud si ay u siiyaan tababarka joogtada ah ee horumarinta xirfadlayaasha ah ee arimahan si ay u helaan xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka iyo kuwa kale ee mas'uul ka ah caafimaadka shaqaalaha.
Agaasimaheena, Mary Sharpe, Udoodeeynta, shaqeynta iyo sharciga dembiyada iyo khibrad ballaaran ee shaqaalaha tababarka ee heer qaran iyo heer caalami. Sannadaha 9 waxay ardayda iyo macallimiintuba ka caawisay horumarinta hoggaanka shakhsiga ah ee Jaamacadda Cambridge. Waxa kale oo aanu la shaqeynaa dad kala duwan oo ay ka mid yihiin HR xirfadlayaasha iyo cilmu-nafsiga.
Marka dadku ka warqabaan suurtagalnimada dhibaatooyinka hoosta ku lug leh ee la xidhiidha isticmaalka jaahwareerka, waxay rabaan inay qaataan mas'uuliyadda shakhsi ahaaneed isbedelka. Xoojinta tababarka ee sababaha asaasiga ah waa istaraatejiyad wax ku ool ah oo looga hortago ama la yareeyo dhibaataynta galmada mustaqbalka.
Faahfaahin dheeraad ah fadlan la xiriir mary@rewardfoundation.org Mobile: + 44 (0) 7717 437 727
* Dhibaateynta galmada waxay dhacdaa marka qof uu ku dhaco dabeecad aan loo baahneyn taas oo ka timid dabeecad galmo oo leh ujeedo ama saameyn kufilan sharafta qofka ama abuurista cabsigelin, cadowtinimo, sharaf-ridid, sharaf-ridid ​​ama khatar ah.
'Dabiicada galmada' waxay dabooli kartaa dhaqdhaqaaqa afka ah, hadal ahaan ama ficil ahaaneed oo ay ka mid yihiin horumarinta galmada aan la jeclayn, taabashada aan habooneyn, qaababka faraxumeynta jinsiga, kaftanka jinsiga, sawirada sawirada sawirrada ama sawirrada, ama u diraan emeelyo leh walxaha galmada.